भ्रमण छोट्याएर राष्ट्रपति भण्डारी आज स्वदेश फर्किंदै — Imandarmedia.com
१अन्ततः मुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि कस्ने भए लगनगाठो, बाहिरियो विवाहको मिति
२प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको निर्णय सुटुक्क फिर्ता लगेकाे खुलासा, यस्ताे अर्काे रहस्य पनि खुल्याे
३पेट्रोलियम पाइपलाइन फुटाएर डिजेल चोरी
४फोटोग्राफको सामान चोरी आरोपमा दुई जना पक्राउ
५६.२ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प जाँदा ३४ जनाको मृत्यु कहाँ हो केन्द्रविन्दु ?
६दिनमा कतिवटा अण्डा खाँदा स्वास्थ्यमा पुग्दैन हानी ?
७आज सुनको मूल्य प्रति ४ सय रुपैयाँले बढ्यो कति रुपैयाँमा हुँदैछ काराेबार ?
८हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा भारी हिमपात र वर्षाकाे कारण पाँच महिनाका लागि नाका बन्द
९प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ, फैसला कहाँबाट गर्ने भन्नेमै विवाद
१०काठमाडाैं नै हल्लिने गरी फेरी भूकम्पको कडा धक्का महसुस, कहाँ हाे केन्द्रबिन्दु ?
११विप्लव नेतृत्वको नेकपाद्वारा आगामी १० गते नेपाल बन्दको घोषणा, विज्ञप्तिसहित
१२गुल्मीमा जन्ती बोकेको जिप दुर्घटना, बेहुलासहित १३ जना घाइते
भ्रमण छोट्याएर राष्ट्रपति भण्डारी आज स्वदेश फर्किंदै
काठमाडौं । मित्रराष्ट्र चीनको राजकीय भ्रमणमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज स्वदेश फर्कंदैछिन् । ९ दिने भ्रमणका लागि चीन प्रस्थान गरेकी राष्ट्रपति भण्डारी निर्धारित समयभन्दा एक दिन अगावै स्वेदश फर्कन लागेकी हुन् ।
स्वास्थ्यमा समस्या आएकाले राष्ट्रपति भण्डारी एक दिन अगावै स्वदेश फर्कन लागेको स्रोतले जनाएको छ । उनी वैशाख ११ गते चीन प्रस्थान गरेकी थिइन् ।
९ दिने भ्रमण पुरा गरी उनी वैशाख १९ गते अर्थात भोलि स्वदेश फर्कने कार्यक्रम तय भएको थियो । हिजो ल्हासा पुगेकी उनी आज ल्हासाबाट सोझै काठमाडौं आउन लागेकी हुन् ।
भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारी बेइजिङमा आयोजना भएको दोस्रो ‘बेल्ट एन्ड रोड फोरम फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन’मा सहभागी भएकी थिइन् ।
उनले चिनियाँ समकक्षी सि चिनफिङसँग दुईपक्षीय भेटवार्ता समेत गरेकी थिइन् । भेटकै अवसरमा पारवहन प्रोटोकलसहित विभिन्न ७ वटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
यसैबीच मे १ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले शुभकामना व्यक्त गरेकी छिन । राष्ट्रपति भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसले श्रमिक हकअधिकारको रक्षार्थ विश्वभरीका श्रमजीविलाई एकताको सुत्रमा बाँध्न सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी हुन् ।
दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले सबै पक्षबाट श्रमको सम्मान र मर्यादा हुनुपर्ने बताएकी छन् । नेपालको बर्तमान संवैधानिक प्रावधान र मजदुरको पक्षमा बनाइएका नयाँ ऐनले उनीहरुको अवस्थामा महत्वपूर्ण सुधार आइ विदेश पलायन हुने क्रम रोकिने उनले आफ्नो सन्देशमा उल्लेख गरेकी छन् ।
आज १ सय ३० अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदैछ । दिवसका अवसरमा विभिन्न मजदुर संगठनले अन्तक्र्रिया, चेतनामूलक र्‍याली जस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेका छन् ।
सन् १८८६ मा अमेरिकाको शिकागोमा ‘आठ घन्टा काम, आठ घन्टा मनोरन्जन र आठ घन्टा आराम’ नारासहित शुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर श्रमिक दिवस मनाइन्छ । सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस यता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अंग्रेजी महिनाको मे १ तारिखमा श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपालमा विराटनगरमा विसं २००७ मा मजदूर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको हो ।